Musa ukundiyeka ngabakwaChainsmokers (kubandakanya uDaya) - Izinto Zobugcisa
Musa ukundiyeka ngabakwaChainsmokers (kubandakanya uDaya)
Le ngoma inezwi lokulila elivela 'Fihla kude' imvumi uDaya. Siva umculi wengoma okwishumi elivisayo exelela inkwenkwe engathembekanga ukuba uyamdinga, kwaye uyambongoza ukuba angamyeki. Uza kancinci, kwaye uyaphinda, 'Ndicinga ukuba ndiyilahlekile' ingqondo yam ngoku 'kwaye ndiyavuma ukuba isentloko yakhe.
Inkwenkwezi yalo mboniso yi-squiggly synth engena emva kweekorasi ezimbini zokuqala. Kuvakala ngathi yi-galactic saxophone, ukubonelela ngembuyekezo emva kokubethwa, ukubethwa kwegubu kunye nokwakhiwa kwengxoxo kuyo yonke ikwayor. Ibetha kanye njengokuba uDaya ecula okokugqibela 'Musa ukundithoba' kwi-chorus, emva koko uphinda loo mgca ngexesha lekhefu lokudlala njengoko i-synthy sax iqhubeka.
Ikhefu emva kwekwayara yesithathu yahlukile: endaweni ye-synth, inxenye yesaxophone yokwenyani ingena, eyigcina intsha kwaye yongeza into ephilayo kwingoma.
Imveliso inikezela ngokutsala, ukwehla okuqhutywa yi-synth, kodwa ingoma iyabulela ukuphindaphinda isihloko: 'Musa ukundiyeka' iviwe amaxesha angama-26 kwingoma, kubandakanya amaxesha aliqela kufutshane nokuphela kwengoma njengoko isombulula ukuya ekupheleni.
Kukhutshwa njenge-duo yokuqala engatshatanga ye-EDM ukusukela ' Iiroses 'impumelelo yetshathi, u-Andrew Taggart utshilo malunga nomkhondo ukuya Ibhilibhodi Iphephancwadi: 'Ndicinga ukuba yenye yeengoma ezilungileyo endizibhalileyo ndaza ndazivelisa. Ndicinga ukuba abantu bazakubethwa ngumoya kwaye yahluke kakhulu kune 'Roses', intle. '
Le ngoma yabhalwa ngu-Andrew Taggart we The Chainsmokers, Scott Harris, kunye noEmily Warren. UHarris wachaza Umbhali weNgoma ukuba intsebenziswano ifikelele njani kwiziqhamo. U-Emily kwaye sibhala kunye ngalo lonke ixesha, utshilo. Ndibhale iingoma ezininzi kunye naye kunaye nawuphi na omnye umntu kakhulu. Siyafumana nje kwaye yindawo entle kakhulu xa sikunye. Wayenze ingoma kunye nabatshintshi kwaye babenjengabo, Sifanele sisebenze nabo. Saba neseshoni kwigumbi likaDrew kwaye wasidlalela ukuqala kwengoma ethi ekugqibeleni yaba 'Musa ukundiyeka.' Sibe nencoko emfutshane malunga nokungacingi nto kwaye uDrew wayengoyena wayekhawulezayo ukuthanda, ungangxibi naloo chorus, yiyo loo nto! Mna no-Emily babesandula ukubuya eCohella kwaye babethetha ngokubhala ingoma enokwenza abantu bazive ngokwenene emnyhadala. Andazi ukuba iya kuba yile ngoma. '
Abatshayi bamaChains batyhilelwe Amatye agiqekayo ukuba uRihanna waliyekile ithuba lokurekhoda le ngoma kunye nabo. Nangona kunjalo i-duo yayilungile ngokwaliwa njengoko babonwabela ukusebenzisana neetalente ezingabalulekanga, ezinje nge-Daya ezayo. UAlex Pall ucacisile, 'Amagcisa amancinci angaziwayo anayo le ndlala- bakulungele ukusebenza nzima nyani.'
UMarcus Kuhne wayalela le vidiyo, ethi ifumanise ukuba abaTshinxi duo baqhuba ehlathini xa bedibana noDaya kunye neqela lakhe, ekubonakala ukuba banamandla e-telekinetic. Amantombazana awasayi kubaphoxa, abenze bangathandi.
Abatshintshi baqala ukwazi u-Emily Warren emva kokuthatha ingoma yakhe yokwahlukana 'Kude Ube Uhambe.' UDrew Taggart wamisela iseshoni yokubhala kunye naye kunye nomnye umbhali wengoma uScott Harris, eyakhokelela kule ngoma. Uxelele uWarren Ibhilibhodi Iphephancwadi intsebenziswano yayiyindalo kunye namava endalo:
'Mna noScott [Harris] sasikwiflethi kaDrew eNew York; wayehlala eNew York ngelo xesha. Kwakulula ngokwenene. Ndicinga ukuba yonke le ngoma yahlangana kwiiyure ezimbalwa. UDrew wayenamandla amaninzi, wayenalo lonke uhlobo lwengoma oluphantse lwenziwa ngelo xesha kwaye wayenobubele bokukhetha into esasiyenza kwaye wayenethemba lokusebenza. '
Nangona amazwi ekuqaleni ayephefumlelwe ziintsuku ezimbalwa eziphambeneyo eCoachella, kuDaya, le ngoma imalunga nokuba sesichengeni kobudlelwane. 'Ukwazi nje ukuba umntu uhlala ekulungele ngalo lonke ixesha-nokuba yintoni-yinto nje ekhuthazayo, uxelele Ubuchule . Lowo ngummangaliso obhekiswa kule ngoma. Imalunga nokuba nentembelo entle kwaye ungoyiki ukuba sesichengeni somntu. '
Oku kuphumelele ukurekhodwa koMdaniso oBalaseleyo kwiiMbasa zeGrammy ngo-2017.
UJoy Williams, owayekade eyiMfazwe yamakhaya, irekhodwe Inguqulelo yepiyano ethe-ethe Yorhwebo lweFama kaRhulumente 'Ukulandela'. U-Williams uxelele Ibhilibhodi Waye wacelwa yiFama kaRhulumente ukuba asebenze ngengoma ekhethekileyo yesibhengezo kwaye, ngokuba ngumlandeli womdaniso weChainsmokers, yena kunye neFama yeLizwe bazinza ekutolikeni kwakhona ingoma ngendlela efanelekileyo 'Ukulandela.'
Ndiza kukubambisa iziqhushumbisi
ibermuda bahama yiza kumama omhle
lyrics andifuni kuphoswa nayinto
Iingoma umntu omthandayo i-jefferson moya
Umsebenzi wobomi wenombolo ye-6